> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Photon 4G
Motorola Photon 4G soo kabashada: accidentially tirtiray aan sawiro ilmahaaga!
Dhaco deletee ilmahayga sawiro ka Motorala Photon 4G! Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado iyaga? Waxaan ahay Bakhtiga! Xaaskeyga waa la socday inay i dilaan !!! Fadlan caawi !! - Mike
Halis ah, ha ka welwelin. Haddii aadan isticmaali telefoonka in sawiro cusub ama videos qaadan, waxaa jira fursad wanaagsan oo aad ka bogsato sawirada tirtiray ka Motorala Photon 4G. Files New overwrite kartaa sawirro aad tirtiray, oo waxaad ka samaysaa kabashada dhib badan. Sidaas qaado si fiican telefoonka marka aad aqrinayo this.
First of dhan, aad u hesho a Motorola Photon kabashada sawir qalab: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Labada ka mid ah barnaamijyada soo kabashada sawir waa la isku halayn karo oo xirfadle ah. By isticmaalkiisa, waxaad soo kaban karto sawiro oo dhan ka Motorola Photon 4G in 3 tallaabo, iyadoo aan loo eegayn haddii aad iyaga waayay formatting, la tirtiro ama qaar ka mid ah sababo kale.
Halkan waa version maxkamad lacag la'aan ah, waxaad isku dayi kartaa barnaamijka Motorola Photon kabashada sawirka hadda. Just dooro version saxda ah ee barnaamijka your computer.
Fiiro gaar ah: Ha iloobin in aad ku kaydiso natiijada baaritaanada haddii aad tahay inuu ka soo kabsado faylasha helay ka dib, si aad uga fogaato khasaaraha xogta.
Talaabooyinka ee soo kabsaday sawiro ka Motorola Photon 4G
Step1. Burcad barnaamijka Motorola Photon kabashada sawir
Marka bilaabay barnaamijka, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan telefoonka in kombiyuutarka la cable ah digital, oo hubi in uu la ogaado. Markaas riix "Start" button in interface ugu muhiimsan si ay u bilaabaan soo kabashada sawir Motorola Photon.
Step2. Dooro in iskaan dhammaan faylasha tirtiray aad Motorola Photon 4G.
Step3. Hubi oo ka soo kabsado sawirada tirtiray ka Motorola Photon 4G ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Motorola Photon ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.